Dunida oo laga dhigo meel wanaagsan, hal adeeg oo adeeg ah kolkiiba | Faahfaahinta Wararka Degmada
In kasta oo adduunka intiisa badani ku qaadatay sanadkii la soo dhaafay inay sii kala fogaadaan, koox arday ah oo dhigata Dugsiga Dhexe ee Oak-Land ayaa si adag uga shaqeynayay sidii ay isugu soo celin lahaayeen Xubnaha Ururka Sharafta Qaranka ee Dhallinyarada (NJHS) waxay sameynayaan wax kasta oo ay ka fekeri karaan si ay u daryeelaan shakhsiyaadka ay saameynta ku yeelatay COVID-19.
“Waxay ahayd sanad aad u adag qof walba,” ayay tiri Ella Begnaud oo dhigata fasalka sideedaad, oo u shaqeysa madaxweyne kuxigeenka NJHS. "Laakiin waxaan sameyn karnaa isbeddel noocaas ah."
Begnaud iyo asaageeda kooxda hogaaminta NJHS waxaa ka go'an u adeegida bulshada. Sannad kasta ardayda NJHS waxay qabtaan boqolaal saacadood oo ah mashaariic loogu adeegayo bulshada. Sannad caadi ah, ardaydu waxay ku qaadan karaan qayb wanaagsan waqtigaas tabarucidda bulshada. Laakiin iyada oo in badan oo ka mid ah ikhtiyaarrada mutadawacnimo ee shakhsiyan ah ay xaddidan yihiin sannadkan, waa inay hal abuur yeeshaan. In kasta oo COVID laga yaabo inay xadideyso fursadaha qaarkood, waxay xaqiiqdii siisay kuwa kale oo badan siyaabo ay ardaydu ku caawin karaan.
Sannadkan ardayda NJHS waxay garawsadeen in dadku shaqo beeleen oo ay dhaqaale ahaan la daalaa dhacayaan cudurrada faafa. Waxay fahmeen in qaar ka mid ah shakhsiyaadka ugu nugul ay go'doonsanaayeen oo gebi ahaanba kali yihiin. Waxay xitaa maqleen dad ay tahay inay dhiibaan xayawaankooda maxaa yeelay iyagu ma daryeeli karaan mar dambe. Marka ardaydu waxay isku xilqaameen inay abaabulaan wadista cuntada ee loogu talagalay Dooxada Wacyigelinta, uruurinta xirmooyinka nadaafadda ee hoyga haweenka maxalliga ah, u abuuraan alaabada caruurtu ku ciyaaraan ee loo yaqaan 'Humane Society', warqado ugu diraan dadka waayeelka ah laba guri oo kalkaaliyayaal caafimaad ah, cunno ku xirxiraan Cuno Caruurteyda Gaajaysan, oo xitaa u soo qaado hadiyado iyo qoraalo gaar ah macalimiintooda iyo shaqaalahooda Oak-Land.
Julie Coe, oo ah lataliye iskuul iyo la taliyaha NJHS ayaa tidhi "Waxay igu dhiirigelinaysay aniga lataliye ahaan inaan arko sida ay u shaqeeyaan." “Runtii way ka talaabsadeen waxyaabihii lagu heshiiyey. Waxay la yimaadaan fikradaha iyagaana qaata oo carara. ”
Xitaa intii lagu guda jiray barashada masaafada kooxdu way sii firfircoonayd. Waxay kulmaan laba jeer usbuucii iyagoo adeegsanaya Zoom si ay fikradaha uga fakaraan iskuna dubbaridaan howlaha adeegga. Waxay bilaabeen wadista si ay ugu ururiyaan kaararka kafeega macallimiinta intii ay ku jireen Zoom. Waxay sidoo kale abaabuleen dadaalka lagu sameynayo alaabta lagu ciyaaro eeyga loona diro waraaqo dadka waayeelka ah dhammaantood iyagoo kulmaya guriga.
"COVID wuu na saameeyay, laakiin wali waxaan awoodnaa inaan wax u qabano bulshada si aan u caawino - xitaa shaashad," ayuu yiri Brock Rueber oo ah fasalka sideedaad, khasnajiga NJHS. “Waxay dareemeysaa wanaag inaad wax u qabatay bulshada. Hal ficil oo yar ayaa badali kara nolosha. ”